(ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
၁၈၂၄-ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်ပညာရှင် ဂျိုးဇက်ဖူရီယေးက ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်အကြောင်း စတင်ဖေါ်ထုတ်ရေးသားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေပြင်၊ ရေပြင် စသည်တို့မှ ကောင်းကင်ယံသို့ ပြန်ကန်ထွက်လာသော အပူဓာတ်များကို လေထုတွင်းရှိ ဓာတ်ငွေ့ အချို့က စုတ်ယူထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကို ပူနွေးစေသည်ကို ဖန်လုံအိမ် အာနိသင်ဟု ခေါ်သည်။
↑ IPCC AR4 SYR Appendix Glossary (PDF)။ 2008-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Le Treut H, Somerville R, Cubasch U, Ding Y, Mauritzen C, Mokssit A, Peterson T and Prather M (2007). Historical Overview of Climate Change Science In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Solomon S, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt KB, Tignor M and Miller HL, editors) (PDF), Cambridge University Press။ 2008-12-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မှန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့&oldid=464277" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၉၊ ၀၁:၄၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။